Nagu saabsan - Zhangzhou Sunny Flower Import Oo Dhoofinta Co., Ltd.
SIDEE AYAAN KU HELNAY BILAABKEENA?
Sanadkii 2008, Laba dhalinyaro ah oo jaamacada ka qalin jabiyay oo kala ah Cassie & Jack, ayaa soo galay warshadaha ganacsiga shisheeye ee dhirta la shiiday jacaylkooda ubax darteed. Waxay sii wadeen barashada iyo shaqada adag, waxayna uruursadeen khibrad qiimo leh, labo sano kadib waxay bilaabeen safarkooda ganacsi.
Sanadkii 2010, Waxay bilaabeen inay lashaqeeyaan xanaano ku taal magaalada Shaxi Town, magaalada Zhangzhou, taas oo inta badan soo saarta geedo banyan kala duwan leh, sida Ficus ginseng, Ficus S qaabka iyo geedaha Ficus ee muuqaalka.
Sanadkii 2013, Wadashaqeyn lala yeesho xanaano kale ayaa lagu daray, taas oo ku taal magaalada Haiyan ee magaalada Taishan, halkaas oo ah aagga ugu caansan koritaanka iyo ka shaqeynta Dracaena Sanderiana (aargudasho ama baaskiil curl ah, bamboo lakab isku daboolan, bamboo toosan, iwm)
Waxay si adag u xakameeyaan tayada oo ay siiyaan adeeg maskax leh macaamiisha, taas oo ku guuleysatay kalsoonida macaamiil badan.
Sanadkii 2016,Zhangzhou Sunny Flower Import and Export Co., Ltd. waa la diiwaangeliyey lana aasaasay. Sababtoo ah talobixin xirfadeed badan, tayo aad u fiican, qiimo tartan iyo adeeg tixgelin leh, waxay ku guuleysataa sumcad wanaagsan macaamiisha dhexdooda.
Sanadka 2020, Xannaano kale ayaa la aasaasay. Xannaanadu waxay ku taal Baihua villeage, Jiuhu Town Zhangzhou City, halkaas oo ah meesha ugu caansan ee dhirta kaladuwan ee Shiinaha. Waana jawi wanaagsan iyo goob ku habboon - hal saac oo keliya u jirta dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Xiamen. Xannaanada carruurtu waxay ku fadhidaa aag 16 hektar ah waxaana lagu qalabeeyaa nidaamka xakamaynta heerkulka iyo nidaamka buufinta otomaatigga ah, waxay kaa caawinaysaa in la sii buuxiyo amarrada macaamiisha.
Hadda, Zhangzhou Sunny Flower Import and Export Co., Ltd. waxay khabiir ku noqotay warshaddan. Waxay ku takhasustay soo-saarka iyo iibinta dhirta iyo ubaxa, iyo Ficus Microcarpa, Sansevieria, Cactus, Bougaivillea, Pachira Macrocrpa, Cycas, iwm. Dhirta waxaa loo iibgeeyaa dalal kala duwan oo adduunka ah, sida Netherlands, Italy, Germany, Turkiga iyo wadamada bariga dhexe.
Waxaan aaminsanahay in dadaalkeena joogtada ah, macaamiisheenna iyo annaga aan awoodi doonno inaan mar walba guuleysanno.
Ku soo dhowow inaad na soo booqato iyo xannaanadayada.